Moscow | ny tsy manam-petra tontolo izao voarindra
Posted in toerana . fitiavana . isika . mitranga . masoandro
Na dia eo aza ny fandrahonana maro be angano momba Moscow, tsirairay, iza no mahery kokoa noho ny tahony, Moscow manokatra raha tsy izany. Rehefa afaka andro vitsivitsy velona fahatsapana ao Moscow, izany tanàna niaviany. Izy mameno anao amin'ny hery sy ny ao tsara mihitsy.
Ny tanàna manana be dia be ny tsara sy ny nampijaliana ny olona, izay foana any ho any mba mihazakazaka, angamba, Affairs. Maoskovita ireo olo-be ara-kolontsaina, na dia eo aza ny ankapobeny bafflement, Vitsy dia misaotra anao, raha manokatra varavarana ve ianareo na hazòny izy. na dia, misy ny sasany tena ampoizina mihitsy ny herisetra ao amin'ny fitondran-tena ny olom-pirenena sasany.
Ny fikambanana ny fiainana ao amin'ny tena miavaka. Fa raha tsy misy isalasalana fa mba hamaritana izay nivoy ireo teknolojia. tsara, Toa, dia tena mampihomehy. About Moscow afaka miteny, fa ny tanàna fiainana, mety, amin'ny lany ny olom-pirenena ', fa tafavoaka velona. fa, raha ampitahaina amin'ny Moscou, renivohitry ny akaiky indrindra “rahalahy” ny fanjakana amin'ny faka mitovy anarana – ny renivohiny mandrezatra, ary, Izany mahatonga mihatra amin'ny firenena iray manontolo izany faka. Ny antony io dia mazava hetsika: “trondro mandrezatra izay avy amin'ny lohany”. Ary raha misy mitady ny firenena, izay mety lo ho amin'ny fiainana, ary avy eo amin'ny tany dognit – ity firenena ity dia hifanaraka anao. firenena fankahalana, fitaka, nasty, OMpiara-na mamanala vavy, fandravana sy ny mamoy fo, izay nahantona “voalavo”, “hala” Ary tamin'ny indray “kalalao” . Ny toerana tsara, izay afaka miandry ny, izay tsy hitranga.
Moscow – tanàna, izay nandritra ny taona maro no miandry anao.
Azo antoka ihany no nijery ny lanitra
- Ny fitiavana ihany.
fa, tokoa, I
Tiako ity tanàna ity,
ary, mety, Nilaza tamiko izy tena lafo
(Tsy tonga saina ny tenako).
Mety ho lasa tia : I
ary ny tanànan'i Moskoa.
Afaka miaina tsy misy Moscow,
fa raha tsy misy afaka Moscow ahy?..
Moscow pasipaoro aho noho ity lahatsoratra ity.
~ "* ° • Ary handeha aho handeha manerana an'i Moscow • ° * "~
· 0 ♥ ♡ Tiako ianao Moscow ♡ ♥ 0 ·
Aum ☼ ₪ Nisy feo avy amin'ny aina lavitra ● • 0 · ˙˙